Ukulanda kwe-BlackHole Apk Kwe-Android [Uhlelo Lokusebenza Lomculo] - I-Luso Gamer
Ukulanda kwe-BlackHole Apk Kwe-Android [Uhlelo Lokusebenza Lomculo]
January 20, 2022 by John Smith
Yize iningi lamapulatifomu ahlobene nomculo afinyelelekayo ku-inthanethi adumile kodwa awalokothi asekele inketho yokulanda. Lokhu kusho ukuthi abalandeli kudingeka basakaze umsindo ku-inthanethi. Kodwa-ke namuhla lapha silethe lolu hlelo lokusebenza oluhle kakhulu olwaziwa ngeBlackHole Apk.
Manje ukuhlanganisa uhlelo lokusebenza ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android kuzovumela abathandi bomculo. Ukusakaza okungapheli futhi ujabulele amafayela alalelwayo angapheli mahhala ngaphandle kokubhalisa noma ukubhaliswa. Ukulanda nokufinyelela amafayela alalelwayo ku-inthanethi kuthathwa njengokungekho emthethweni.
Iningi lezinkundla ezicebile nezidumile eziku-inthanethi njengeSpotify, i-YouTube nezinye zithathwa njengomthombo ongcono kakhulu wezingoma. Kodwa uma kuziwa ekulandeni amafayela alalelwayo ngokuqondile le nketho ayifinyeleleki. Ngakho-ke kucatshangelwa ukufinyeleleka okulula uchwepheshe walethe i-BlackHole App.
Iyini i-BlackHole Apk
I-BlackHole Apk uhlelo lokusebenza lwe-Android olusekelwa yinkampani yangaphandle. Lapho abasebenzisi beselula abangahleliwe bengalanda kalula futhi bajabulele amafayela omculo angapheli mahhala. Abadinga ukukwenza nje ukufaka inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza.
Lokho kuyafinyeleleka ukulanda kusuka lapha ngokuchofoza okukodwa. Uma sihlola inkundla nezici ezibalulekile, sibona inqwaba yezinketho zochwepheshe ezihlukene ngaphakathi. Lokho kufaka phakathi Izigaba Ezicebile, Isihlungi Sosesho Ngokwezifiso, Isikhumbuzi Sesaziso Sokusunduza kanye namaseva asheshayo.
Iningi labalandeli liyawathanda amafayela omculo kodwa lihlale lifuna ukuthola umthombo oyiqiniso ku-inthanethi. Lokho akunikezeli kuphela ukufinyelela okuqondile kokuqukethwe. Kodwa futhi isekela futhi inikeze le nketho yokulanda. Okwenza kube nokwenzeka ukusakaza amafayela ngemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ngokugxila kunhloso kanye nesicelo sabalandeli, abathuthukisi ekugcineni babuyile nalokhu ku-inthanethi kwe-BlackHole App Download okuphelele. Okumahhala ukulanda kuwebhusayithi yethu. Ukuhlanganisa i thwebula izohlinzeka ngakho kokubili ukusakaza bukhoma nenketho yokulanda.
Igama Umgodi omnyama
Usayizi 25.9 MB
Unjiniyela Umgodi omnyama
Igama lephakheji com.isithunzi.blackole
Isigaba Apps - Isiqophi Abadlali & Abahleli
Esikhathini esedlule inala yamapulatifomu ahlukene abethathwa njengedumile ngokuhlinzeka ngamafayela alalelwayo e-MP3. Nokho empeleni lezo zinkundla zazenza ubugebengu. Izinkundla ezinjalo ze-inthanethi ezingenalayisensi kuthiwa azikho emthethweni futhi ziyingozi ukuzisebenzisa.
Ngaphambilini inqwaba yamanye amathuluzi ethulwa ku-inthanethi. Obekuphelele ekwenzeni imisebenzi ethile kodwa uma sikhuluma ngokufinyeleleka. Bese ezinye zalezo zingabuza noma ziphoqelele umsebenzisi ukuthi athenge okubhaliselwe kwe-premium.
Iningi lezinkundla ezifinyeleleka ku-inthanethi azikwazanga ukusekela umsebenzi wazo. Kodwa muva nje lolu hlelo lokusebenza olusha lokusakaza nokulanda lukhishwe ngaphakathi emakethe. Okuyinto elula futhi evikelekile ukuyifaka ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android.
Yize singenaso isiqiniseko ngentuthuko. Nokho abathuthukisi bathi basebenzela amaphrojekthi athile amasha. Ukutshala lawo maphrojekthi kuzokwenza lolu hlelo lokusebenza lusebenze kahle futhi lube bushelelezi. Asikwazi ukuqinisekisa lokho kuthuthukiswa okubalulekile.
Kepha ochwepheshe bathi lezo zizotholakala ukuthi zisetshenziswe maduze. Ngakho uthanda ukusakaza amafayela omculo ku-YouTube naku-Spotify. Kodwa zisesha uhlelo lokusebenza olusiza ukudala umtapo wezincwadi oyintandokazi ukulanda amafayela aqondile. Khona-ke mayelana nalokhu, siphakamisa labo balandeli ukulanda BlackHole Android.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza ukusakaza bukhoma kwamafayela omculo.
Ngisho nesiteji sisekela isici sokulanda esiqondile.
Okusho ukuthi abasebenzisi bangalanda amafayela angapheli.
Kamuva sakaza lezo ezikumodi engaxhunyiwe ku-inthanethi.
Azikho izikhangiso eziqondile ezibonakalayo.
Isihlungi sokusesha esithuthukisiwe sengeziwe.
I-interface ye-App iyasebenziseka kalula.
Ungalanda Kanjani I-BlackHole Apk
Labo obaseshayo ifayela lokuqala lefayela lohlelo lokusebenza kumele bavakashele leli khasi. Ngoba lapha kuleli khasi, sinikeza inguqulo esemthethweni yohlelo lokusebenza. Ukuqinisekisa ukuvikeleka komsebenzisi kanye nobumfihlo, sifaka i-Apk kuma-smartphone ahlukene.
Laphaya amawebhusayithi amaningi athi anikezela ngamafayela e-Apk afanayo mahhala. Kodwa empeleni, lawo mapulatifomu anikela ngamafayela mbumbulu nawonakele. Ngakho-ke uzimisele ukujabulela izici ze-pro zohlelo bese ulufaka ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android.
Khumbula ukuthi sesivele silifakile ifayela lesicelo kuma-smartphones ahlukene. Ngemva kokufaka uhlelo, siluthole lubushelelezi futhi luvikelekile. Okusho ukuthi abasebenzisi akudingekile ukuthi bakhathazeke ngokuhlanganiswa kohlelo lokusebenza.
Inqwaba yezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo zishicilelwe futhi zabiwe lapha kuwebhusayithi yethu. Ukufaka nokuhlola lezo ezinye izinkundla ezifanayo sicela ulandele futhi ulande izinhlelo zokusebenza ezishiwo. Okukhona I-YTV Player Apk futhi I-YouTube Vanced No Root Apk.
Kuphakathi kokuthi uthanda ukusakaza amavidiyo omculo bukhoma noma usakaze lawo ngemodi yokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Kufanele ulande futhi ufake inguqulo yakamuva ye-BlackHole Apk. Okufinyeleleka kusuka lapha ngokuchofoza okukodwa ngaphandle kokuvumela noma yiziphi izimvume noma ukuzuza okubhaliselwe.
Izigaba Isiqophi Abadlali & Abahleli, Apps Amathegi BlackHole Android, I-BlackHole Apk, I-BlackHole App, I-BlackHole Download, thwebula Imeyili kwemikhumbi
Landa i-AnimeKisa Apk 2022 Ye-Android [Okusha]
I-Movie4me Apk Ukulanda Kwe-Android [Ama-movie ka-2022]